Barea de Madagascar : Vonona hiatrika an’i Soudan -
AccueilSongandinaBarea de Madagascar : Vonona hiatrika an’i Soudan
Na dia fohy aza ny fotoana niarahan’ireo mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar, nanao fanazarantena miaraka eto an-tanindrazana, vonona tanteraka hiatrika ny lalao miverina amin’i Soudan izy ireo, ny alahady 18 novambra izao, eny amin’ny kianjan’ny Cnaps Sport. Lalao fifanintsanana isam-bondrona, hiatrehana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika 2019, na ny Can 2019, any Cameroun.
Ho an’ny Barea manokana, efa nigadona eto an-toerana avokoa ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany toa an-dry Dimitry Caloin, Dabo Ibrahima, Mamy Gervais, Fontaine Thomas, Voavy Paulin, Carolus Andria, Faneva Ima Andriatsima, Lalaina Nomenjanahary (Bolida), Jérémy Morel, sns. Marihina fa ity mpilalao farany, tamin’ity fihaonana amin’i Soudan ity vao nanatevina ny ekipam-pirenena. Ao amin’ny vodilaharana kosa ny toerana misy azy.
Niditra tamin’ny andro fahadimin’ny fanazarantena miaraka ireo mpilalao omaly. Raha ny fanazavan’ny mpanazatra, Nicolas Dupuis, mifototra amin’ny teknika sy taktikan’ ny fanazarantena, ankoatra ny fanamafisana ny tanjaka ara-batana. Teknika famonoam-baolina, taktikam-panafihana, sns.
Araka izany, nanamafy ny mpanazatra fa hanao izay tratry ny heriny sy ny fahaizany ireo mpilalao, ary efa vonona ara-moraly sy ara-batana. « Hiezaka ny haka fandresena hatrany ny Barea ho tombontsoan’ny vahoaka malagasy sy ny firenena, indrindra ireo mpitia baolina kitra. Eny fa na efa tafakatra hiatrika ny Can 2019 aza isika, mila maka fandresena hatrany », hoy i Faneva Ima Andriatsima, kapitenin’ny Barea de Madagascar.
Hatreto, mbola mianto-tena ny ekipa nasionaly fa mbola tsy tazana ny fitondram-panjakana sy ny federasiona malagasy (FMF) amin’ny fanampiana sy fanohanana azy ireo.